အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်များကို လေအေးပေး စက်တပ်မထားပါက ဆရာဝန်များ ကိုဗစ် ကူးစက် မခံရစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ…. – Let Pan Daily
အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်များကို လေအေးပေး စက်တပ်မထားပါက ဆရာဝန်များ ကိုဗစ် ကူးစက် မခံရစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ….
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ လူနာများကို ကုသပေးနေသည့်ဆေးရုံများမှ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များကို လေအေးပေးစက်များတပ်ဆင်မထားခြင်းအားဖြင့် ဆရာဝန်များကို ရောဂါကူးစက်မှုကန့်သတ်နိုင်ကြောင်း ထိပ်တန်းအိန္ဒိယသုတေသနအင်စတီကျူ့တခု၏ လေ့လာမှုအရသိရသည်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှ ရှေ့တန်း ကျန်းမာရေးလုပ်သားများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ်ကိုခံနေရပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကြောင့် ဆရာဝန်အယောက် ၅၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။
“အလယ်မှာထားရတဲ့ လေအေးပေးစက် စနစ်တွေရဲ့လေကြောင်းလည်ပတ်မှုကြောင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို ရောဂါကူးစက်မှုတွေသိသိသာသာဖြစ်လာစေပြီး ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေသေဆုံးနေရပါတယ်။” ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်များထဲပါဝင်သည့် ဘန်ဂလူရူမှ အိန္ဒိယသိပ္ပံအင်စတီကျူ့၏ လေ့လာမှု အရသိရသည်။
လေကြောင်းပြန်လည်လည်ပတ်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် ပြင်ပလေအသုံးပြုမှုမြှင့်တင်ခြင်းသည် အလုံပိတ်ခန်းများတွင် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရမှုလျှော့ချနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောသည်။
ယခင်လေ့လာချက်များအရ အပူပိုင်း ဒေသနိုင်ငံများတွင် လေအေးပေးစက်များဖွင့်ထားခြင်းကြောင့် အလုံပိတ်ခန်းများတွင်ခြောက်သွေ့မသွားစေရန် သတိထားသင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်များရှိနေပြီး အခန်းတွင်စိုထိုင်းဆ ၄၀ နှင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားထားပါက ဗိုင်းရပ်စ်လေမှတဆင့်ပျံ့နှံ့မှုလျော့ကျနိုင်ကြောင်းလည်း အသိပေးသည်။
လေအေးပေးစက်မရှိပါက အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များကို လေမှုတ်သည့်ပန်ကာများတပ်ဆင်ပေးထားသင့်ပြီး အပြင်တွင်လေပြန်မထုတ်ခင် ဆပ်ပြာအခြေခံသည့်လေစစ်ထုတ်မှု သို့မဟုတ် အလွန်ပူသောရေနွေးတို့ဖြင့် သန့်စင်သင့်ကြောင်းလည်း အိန္ဒိယလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြသည်။
လေအေးပေးစက်လိုအပ်သည့် အထူးကြပ်မတ်ဆောင်များတွင် ကိုဗစ် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များကို အခြားကြပ်မတ်ဆောင်များ၏ လေအေးပေးစက်စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မထားရဘဲ စစ်ထုတ်ခြင်းအတွက် ကူးစက်ခံရထားရသည့်လေများကိုဆွဲထုတ်ရန် လေမှုတ်ထုတ်သည့်ပန်ကာများတပ်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းလည်း လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြသည်။
ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ လူနာမ်ားကို ကုသေပးေနသည့္ေဆး႐ုံမ်ားမွ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္မ်ားကို ေလေအးေပးစက္မ်ားတပ္ဆင္မထားျခင္းအားျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားကို ေရာဂါကူးစက္မႈကန္႔သတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိပ္တန္းအိႏၵိယသုေတသနအင္စတီက်ဴ႕တခု၏ ေလ့လာမႈအရသိရသည္။
ကမာၻတဝန္းမွ ေရွ႕တန္း က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ဒဏ္ကိုခံေနရၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဆရာဝန္အေယာက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့သည္။
“အလယ္မွာထားရတဲ့ ေလေအးေပးစက္ စနစ္ေတြရဲ႕ေလေၾကာင္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ တန္ဖိုးရွိတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ေရာဂါကူးစက္မႈေတြသိသိသာသာျဖစ္လာေစၿပီး ဆရာဝန္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြေသဆုံးေနရပါတယ္။” ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားထဲပါဝင္သည့္ ဘန္ဂလူ႐ူမွ အိႏၵိယသိပၸံအင္စတီက်ဴ႕၏ ေလ့လာမႈ အရသိရသည္။
ေလေၾကာင္းျပန္လည္လည္ပတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပင္ပေလအသုံးျပဳမႈျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အလုံပိတ္ခန္းမ်ားတြင္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကေျပာသည္။
ယခင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အပူပိုင္း ေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလေအးေပးစက္မ်ားဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ အလုံပိတ္ခန္းမ်ားတြင္ေျခာက္ေသြ႕မသြားေစရန္ သတိထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး အခန္းတြင္စိုထိုင္းဆ ၄၀ ႏွင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားထားပါက ဗိုင္းရပ္စ္ေလမွတဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေလ်ာ့က်ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးသည္။
ေလေအးေပးစက္မရွိပါက အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္မ်ားကို ေလမႈတ္သည့္ပန္ကာမ်ားတပ္ဆင္ေပးထားသင့္ၿပီး အျပင္တြင္ေလျပန္မထုတ္ခင္ ဆပ္ျပာအေျခခံသည့္ေလစစ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အလြန္ပူေသာေရေႏြးတို႔ျဖင့္ သန္႔စင္သင့္ေၾကာင္းလည္း အိႏၵိယေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပသည္။
ေလေအးေပးစက္လိုအပ္သည့္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ကိုဗစ္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္မ်ားကို အျခားၾကပ္မတ္ေဆာင္မ်ား၏ ေလေအးေပးစက္စနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားရဘဲ စစ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ကူးစက္ခံရထားရသည့္ေလမ်ားကိုဆြဲထုတ္ရန္ ေလမႈတ္ထုတ္သည့္ပန္ကာမ်ားတပ္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပသည္။